Mareykanka oo sheegay in uu dilay xubno ka mid ah AL-shabaab – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMareykanka oo sheegay in uu dilay xubno ka mid ah AL-shabaab
War qoraal ah oo ka soo baxay Taliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in ay dileen labo ka mid ah Xarakaada Al-shabaab sidoo kalena ay dhaawaceen mid kale.
Mareykanku waxaa uu sheegay in weerarkaas uu ka fuliyay Agagaarka Degmada Jilib ee Gobolka Jubada dhexe ee koofurta Soomaaliya.
Warbixinta Mareykanka waxaa lagu sheegay in uu kordhiyay weerarrada ka dhanka ah Al-shabaab,iyada ooo weerarka Jilib uu yahay midkii 6aad ee Sanadkan uu Mareykanka ka fuliyay Soomaaliya.
Mareykanka ayaa sheegay in weerarrada ka dhanka ah AL-shabaab uu kordhiyay isaga oo intaas ku daray in weerarrada ka dhanka ah Daacish ee gudaha Soomaaliya ay ka yaryihiin kuwa Al-shabaab.
Todobaadkii la doo dhaafay ayuu Mareykanku sheegay in labo weerar oo kale oo noocan ah uu ka fuliyay Soomaaliya,iyada oo Sanadkii tagay ee 2017kii Mareykanak uu Soomaaliya ka fuliyay 34 weerar,taas oo ka badan dhamaan weerarradii Mareynaka ee Soomaaliya tan iyo 2008ddii.
DEG DEG:-Ciidamada Dowladda Oo Goordhow La Wareegay Deegaanka Moqakori
42,001 total views, 2,754 views today
42,001 total views, 2,754 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
42,073 total views, 2,753 views today
42,073 total views, 2,753 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
42,085 total views, 2,753 views today
42,085 total views, 2,753 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
42,110 total views, 2,754 views today
42,110 total views, 2,754 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
42,137 total views, 2,750 views today
42,137 total views, 2,750 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]